Hal Bilyan oo Doolar Youtube? Waxaa laga yaabaa in. | Martech Zone
Hal Bilyan oo Doolar Youtube? Waxaa laga yaabaa in.
Axad, Oktoobar 1, 2006 Axad, Oktoobar 1, 2006 Douglas Karr
Waxaa jira hadal hayn badan oo ku saabsan balaayiin doolar oo laga hadlayo lagana gudbiyo iibka Youtube, MySpace, Facebook, iwm. Mark Cuban leeyahay sheegay kaliya moron ayaa ku bixin lahaa intaas oo Youtube ah. Waan hubaa haddii aan dib u laabi karno waqtiga, dad badan ayaa la yaabi doona sababta Mr. Cuban uu u sameeyay lacag badan intii uu ku soo noqday boobka Dot Com. Waxaan maqlay isaga oo loogu yeedhay 'Milyaneerka shilka' waxaanan u malaynayaa inay ku habboon tahay. Waxaan aqriyay xoogaa balooggiisa waana wax badan sida akhrinta gabdha yar ee 12 jirka ah MySpace. Wuxuu yidhi, waxay tidhi, blah, blah, blah.
Dhiirrigelinta Dot Com iyo bust waxay ahayd guuldarro lama huraan ah oo sare u qaadday tikniyoolajiyadda iyo websaydhka iyada u gaar ah dhaqaalaha. Inta badan lacagta luntay waxay ahayd mid si fudud loogu raadinayay qaab ganacsi oo wanaagsan. In kasta oo aan wali la xallin, qaabka ganacsiga ayaa bilaabay inuu qaab yeesho.
Waxaan ahaa dhalleeceyn weyn oo ku saabsan cabbiraadda 'indhaha isha' laakiin waxay umuuqataa inay tahay waxa ku saabsan dhaqaalahan cusub ee webku. Youtube looma iibsanin waxa ku jira ama tikniyoolajiyadda - waxaa lagu qiimeeyaa heerkaas sare maxaa yeelay tirada dhagaystayaasha xiisaha leh ee ay leedahay. Haddii bilyan doolar ay aad ugu badan tahay Youtube, maxay ku fiicnaan laheyd Ford inuu ku iibiyo dhowr bilyan? Ford wax faa'iido ah ma helayo sidoo kale… laakiin qof walba wuu ogyahay inay u qalanto. Nasiib darrose, haddii Youtube-ka ay iibsato awood weyn oo internet ah… waxay ku dareysaa astaamo badan oo 'indho-fiiq' ah.
Taasi waxaa loo yaqaan 'Market Share'.
Waxaanan bilaabaynaa inaan aragno bilowgii Suuqa Share oo qaab u yeelanaya shabakadda. Google, Yahoo! iyo Microsoft dhammaantood waxay raadinayaan oo iibsanayaan Suuqa Share. Natiijo ahaan, wax kasta oo goobta leh dhagaystayaal aad u tiro badan ayaa bartilmaameed u ah sida TV-ga ama Raadiyaha u bartilmaameedsado markay leeyihiin dhagaystayaal badan. In kasta oo dakhligu aanu hadda jirin… dhagaystayaasha aad iibsan karto maanta waxay ku bixin doonaan dakhliga xayeysiinta berri. Waa nooc duug ah oo la shaqeeya moodooyinka kale ee warbaahinta - wargeysyada ayaa tusaale fiican ah. Lacag badan ayaa laga sameeyaa macaamiisha dakhliga xayeysiiska marka loo eego dakhliga macaamiisha.
Weli ma hubo in qaabka ganacsiga ee 'iibsashada kubbadaha indhaha' ay ku habboon yihiin warshadaha internetka, in kastoo. Waxaan u maleynayaa inay tahay inaan sugno oo aan aragno.
Xisaabiyaha Lacag-bixinta ee 'AJAX' ayaa taagan!
Bartilmaameed, Fadlan xir xirmooyinka Digaagga